Agaasimaha Guud ee Boostada iyo Isgaarsiinta oo booqdey machadka Isgaarsiinta Afrika, Nairobi.SAWIRO – Radio Muqdisho
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Axmed Xaaji Cabdi oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa booqdey Machadka Isgaarsiinta Afrika ee marka lasoo gaabiyo magaciisa loo yaqaano AFRALTI oo ay xubno ka yihiin waddamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika.
Booqashada Agaasimaha ayaa timid kadib markii uu casuumad ka helay Agaasimaha Guud ee machadka AFRALTI oo lasameeyey 1987 waxayna labada agaasime ka wadahadleen sidii Machadka AFRALTI uu utababar u siin lahaa shaqaalaha Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta.Machadkan ayaa lagu tababaraa xirfadlayaasha Afrika kuwaasoo ka shaqeeya Isgaarsiinta waxaana lagu dhigaa Koorsooyin badan. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiiinta ayaa warbixin dheer ka bixiyay xaaladda dalka iyo gaar ahaan baahida Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta oo wadda dadaal badan.
Maanta oo aheyd Talaado waxuu Agaasimaha Guud o uu weheliyo lataliyaha Xafiiska Raisul Wasaaraha dhinaca Isgaarsiinta mudane Burhaan Iimaan ay la kulmeen hay’adda Sharci dajinta Kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Communication Commision of Kenya(CCK) . Labada masuul ayaa warbixin ka bixiyay xaaladda wasaaradda iyo dadaalka ay dawladdu ugu jirto in la dhameystiro xeerka Isgaarsiinta dalka kaasoo waxbadan ka tari doona sharciga Isgaarsiinta dalka.
Agaasimaha Guud oo khudbad kooban siiyay masuuliyiinta CCK ayaa ka codsaday hay’adda CCK iney tababar badan siiyaan shaqaalaha wasaaradda isagoo sheegey in wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiintu diyaar u tahay inay waxbadan ka barato CCK. Machadka AFRALTI iyo hay’adda CCK ayaa aad usoo dhaweeyey masuuliyiinta waxeyna balanqaadeen inay taageero buuxda siinayaan wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta iyadoo loo balamiyay kulamo kale iyo in shaqaalaha wasaaradda loo tababaro.
Kulamadii Agaasimaha Guud uu la yeeshay madaxda hay’adahan ayaa ahaa kuwa midha dhal ah laguna wado in labada dhinac ay dhexmaraan xariir wanaagsan kuna bilawdey jawi wanaagsan.
MUQAA;-Madaxweyne Xasan Sheekh oo furay shirka dib u heshiisiinta gobollada Dhexe, Muqdishana ku soo laabtay(Sawirro)